“प्रचण्ड नहुँदापनि देश चल्छ, ओली नहुँदापनि देश चल्छ”:रामनारायण विडारी - Sidha News
“प्रचण्ड नहुँदापनि देश चल्छ, ओली नहुँदापनि देश चल्छ”:रामनारायण विडारी
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्डले अविश्वासको कुरा ल्याउन लागेको विषयलाई समेत खारेज गरे। प्रचण्डको तर्फबाट त्यस्तो कुनै पनि तयारी नभएको उनले बताए।
तपाईहरु हिजो प्रचण्डकहाँ पुग्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्डले अविश्वाको प्रस्ता ल्याउँदैहुनुहुन्छ अरे ? पार्टी फुटाउन लाग्नुभएको छ भन्ने हल्ला छ नि ? भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने “कसले भन्या ? केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्षलाई भनेको भए त मलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर मैले अविश्वासको कुरा पनि सुनेको छैन् । उहाँलाई कुनै प्रकारको राजीनामा पनि मागेको छैन् । पार्टी फुटाउने कुरा पनि छैन् ।”
यस्तै उनले दलीय व्यवस्थामा पार्टीभन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने पनि बताएका छन्। ओली पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएको हुँदा उनको कामको जस र अपजस पार्टीलाई आउने उनको भनाई छ।
“उहाँ त पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएको हो नि । प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको जस र अपजस पार्टीलाई आउँछ । दलीय व्यवस्थामा पार्टीभन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुँदैन्।”,उनले भने,”उहाँले म राजीनामा दिन्न, मैले राजीनामा दिएँ भने देश बर्बादितिर जान्छ भनेको पनि मैले सुनें । त्यो पनि त्यस्तो कुरा हुँदैन् । कसैले राजीनामा दिँदा देश डुब्ने, कसैले राजीनामा दिँदा देश उठ्ने, त्यसो हुँदैन नि । मैले राजीनामा दिँदा देश बर्बादितिर जान्छ भन्ने उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होला, कसैले राजीनामा दिएर पनि देश बर्बादितिर जाँदैन् । विपीले राजीनामा दिएर पनि बर्बाद भएन, विपी नहुँदापनि देश चल्यो, राणा नहुँदापनि देश चल्यो, राजतन्त्र नहुँदापनि देश चल्यो, हिजो त राजतन्त्र नभई देशै चल्दैन भन्थे, प्रचण्ड नहुँदापनि देश चल्छ, ओलीजी नहुँदापनि देश चल्छ । त्यस्तोरि बुझ्नपर्यो नेताले । शक्तिमा हुने व्यक्तिले जे पायो, त्यही बोल्नुहुन्छ ?”